Mon, Jul 23, 2018 | 01:57:08 NST
19:56 PM (4years ago )
एकहजार ८३ अंकमा पुगेको नेप्से फेरि घट्न थाल्यो नि ?
अहिले भइरहेको गिरावट शेयर बजारको निरन्तर घटबढकै स्वभाविकै प्रक्रिया हो । एकहजार ८३ मा पुगेको नेप्सेमा अहिले त्यसमा ४० अंकको करेक्सन देखिएको छ । लगानीकर्ताले नाफा बुकिङ गरिरहेकोले पनि बजार केहि करेक्सन भएको हो ।
अर्कोतर्फ राष्ट्र बैकले ल्याएको मौद्रिक नीति अनुसार कस्ता निर्देशन ल्याउँछ भन्ने कुराको प्रभाव पनि हुन सक्छ । जस्तो राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा केहि कडाई गर्‍यो भने त्यसको असर देखिन सक्छ र त्यहि असरको संकेत पनि हो अहिलेको करेक्सन ।
यो गिरावट स्वभाविकै हो भने पहिलेको बृद्धि पनि स्वभाविकै थियो ?
समग्र बजार घटबड हुँदै माथिमाथि भएको अवस्था हो । बढ्ने बढि घट्ने कम हुँदा बजार माथि गएको हो । त्यसमा लगानीकर्ताको मनोविज्ञानकै प्रमुख भूमिका छ । अनि बजेट र मौद्रिक नीतिमा त्यती कडाई नगरी खुकुलोपनमै बसेकाले बजार बढेको हो ।
त्यस्तै कम ब्याजदर तथा अधिक तरलताले पनि लगानी बढायो । अधिक तरलताको प्रभाव अहिले पनि देखिएको छ कि ट्रेजरी बिलको ब्याजदर अझै घटिरहेको छ । बैंकहरुले ब्याज घटाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन । यसले शेयर लगानीकर्ताहरुले पनि हिजो भन्दा कम ब्याजमा पैसा पाइरहेका छन् । यसकै कारण बजार माथिभन्दा माथि गएको अबस्था हो ।
अहिले केहि सच्चिएको भएपनि समग्रमा बजार बढेकै अवस्थामा हो, यस्तो बेला लगानीकर्ता कसरी सुरक्षित हुने ?
शेयरबजारमा लगानीकर्ता सुरक्षित हुने त राम्रो कम्पनि छानेर नै हो । जसले बजार बढ्दा प्रतिफल देओस र घट्दा पनि ठुलो नोक्सानी नहोस । अहिले चौथौ त्रैमासको प्रतिवेदनहरु पनि आइरहेको छ । ति प्रतिवेदन अध्ययन गरेर राम्रो कम्पनि छान्नु पर्‍यो । अर्को कुरा नाफा हुनेले आफ्नो नाफालाई राखेर लगानी सुरक्षित गर्न सकिन्छ । अथवा आफ्नो लगानी उठाएर बाकि शेयर राख्न सकिन्छ । यसले गर्दा ‘जिरो रिक्स’ (जोखिम शून्य अवस्था)मा बस्न सकिन्छ ।
आफ्नो पोर्टफोलियोलाई शून्य लगानीमा परिणत गरेर बस्न सकिन्छ । यस्तो समयमा सुरक्षित हुने यो तरिका सवैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो । अहिले घटेको बेला लगानीकर्ताले किन्ने बेला हो । तर यो बजारको उल्टो प्रणाली छ । बढेको बेला दौडेर किन्न जाने र घटेको बेला डराएर बेच्न जाने त्यस्तो गर्नु हुदैन् ।
अहिले जसरी घट्दै जान थालेको छ । यो नै किन्न सहि समय हो ?
अब किन्दै जान सकिन्छ । किनभने अब कम्पनिहरुका प्रतिवदेहरु पनि आइरहेका छन् । पोहोर भन्दा अहिलेको नाफाको अवस्था, लाभांशको अवस्था पनि मूल्यांकन पनि सकिन्छ । अब बिस्तारै कम्पनीहरुले नाफाको घोषणा गर्न पनि सुरु गरिसकेका छन । कति बाँढ्ने भनेर यसको असर पनि बजारमा सकारात्मक पर्दैै जान्छ । त्यसैले अहिले नै डराएर बजारबाट निस्कनुपर्ने अवस्था छैन् । अझै बढ्ने सम्भावना छ ।
अब अझै बढ्ने सम्भावना कति हो ?
गत वर्ष भन्दा बजार एकसय प्रतिशतले बढेको अवस्था छ । एकसय प्रतिशतले बढेको अवस्थामा ३०/४० अंकको गिरावट भनेको सामान्य हो । त्यसमा पनि एक हजार भन्दा माथिको इन्डेक्समा ३०/४० अंकको गिरावट भनेको ठुलो होईन । अब कम्पनीका नाफा घोषणा गर्दै जाँदा त्यहाँ लगानीकर्ताको अपेक्षा अनुसार लाभांश घोषणा गरे भने नेप्से अहिलेसम्मकै धेरै रहेको ११ सय ७५ भन्दा माथि जाने सम्भावना प्रबल छ ।
११ सय ७५ पुगेर एकैचोटी तल झर्दा थुप्रै लगानीकर्ता टाटपल्टेको अवस्था दोहोरिने हो की ?
यसपटक त्यस्तो हुदैन् । जुन किसिमको ११ सय ७५ पुगेर मार्केट तल आउँदा त्यो बेला कम्पनीका सेयर मूल्य जे थियो त्यो किसिमको भयावह स्थिति र लगानीकर्ताले उत्पातै धेरै गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले घरजग्गाको कारोबारको नोक्सानीको कारणले जुन प्रोभिजनिङ गरिरहेका थिए । त्यो बिस्तारै उठाउँदै गएको र नाफा पनि बढाउँदै गएको अवस्था छ । त्यसले बैंकको रिक्स पनि कम देखिएको र नाफा पनि बढेको छ यसले लगानीकर्ताको आकर्षण पनि बढ्ने देखिन्छ । यसको असरचाँही समग्रमा बजारमा सकारात्मक नै पर्ने देखिन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा नयाँ लगानीकर्ताले सुुरक्षित हुन र पुराना लगानीकर्ताले पोर्टफोलियो सुरक्षित राख्न कुन समूहका कम्पनीमा पैसा हाल्दा राम्रो होला ?
अब यो नै समूह भन्न सकिन्न । हरेक समूहमा कोहि राम्रा कोहि नराम्रा कम्पनी छन् । हाईड्रोपावर भने पनि त्यहाँ पनि नराम्रा कम्पनी पनि छन् । बिमामा पनि नराम्रा कम्पनी छन् । बैकिङमा पनि राम्रा नराम्रा कम्पनी छन् । त्यसैले यहि समूहमा सबै पैसा लगाउने भन्ने होईन । कोही हाईड्रो राम्रो छ त्यसमा लगाउने हो । कुनै बैंक राम्रा छन त्यसमा लगाउने हो । कुनै विकास बैंक राम्रा छन त्यसबाट छान्ने हो । नेपाल स्टक एक्सचेन्जले ९ वटा समूह वर्गिकरण गरेको छ । सबै समूहबाट राम्रा कम्पनी छानेर सुरक्षित हुने हो । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा एउटै समूहमा आकर्षण हुने अवस्था बनेको छैन् । तर बैंकिङ समूह बिस्तारै राम्रो आकर्षणको समूह बन्दैछ ।
त्यसो भए कसरी छान्ने त राम्रा कम्पनी ?
त्यसको लागि र कम्पनीहरुको रिपोर्ट नै हेर्ने हो । तर धेरैको रिपोर्ट आइसकेको छैन । बैंकहरुको रिपोर्ट चाँडो आइरहेको छ त्यहाँबाट बैंकहरुलाई हेर्न सकिन्छ ।
तर हाईड्रो, बिमा र कम्पनीको रिपोर्ट आएको छैन अब चौथौ त्रैमासको रिपोर्ट आउन थालिसकेकाले हामी तेश्रो त्रैमासको रिपोर्टलाई लगानीको लागि निर्णय गर्ने आधार मान्न सकिन्न त्यसको लागि चौथौ त्रैमासको रिपोर्ट नै चाहिन्छ त्यसैले केहिसमय कुर्नु नै पर्छ ।